Robit achụ zuru ụwa ọnụ ibu
Post oge: 06-06-2018
Robit kwuru na a ga-budata ike ya DTH azụmahịa ebe, na abụọ mbụ, ụlọ ọrụ cumulative net ahịa ga-adị ukwuu karịa € 75 nde (US $ 83 nde). Dị ka Robit, ndị mbụ bụ akụkụ dị mkpa nke ya zuru ụwa ọnụ ibu atụmatụ, na ọ bụ looki ...GỤKWUO »
Atlas Copcoconsolidates Chinese Ngwuputa arụmọrụ
The ụlọ ọrụ kwuru na aga ga-amụba arụmọrụ ma na-ewusi ụlọ ọrụ maka ọdịnihu. Atlas Copco ga-emechi ya eweta na Shenyang, nke manufactures tumadi n'aka-ẹkenịmde rock u maka Ngwuputa na-ewu, na-akwaga ebe arụmọrụ osisi na Zhangjiakou. Na Shenyang, banyere 225 Pee ...GỤKWUO »
The ụlọ ọrụ kwuru na ịgagharị usoro uzo ozo ga-ekwe ka ọ na-eche banyere ndị na ngwaahịa na kasị ukwuu ibu nwere. Katapila kwukwara na ụlọ ọrụ na ya na-ere ahịa esịne ẹdude ahịa na ga na-akwado ndị ụlọ na ogidi na track malite ịgba fleets ugbu a ...GỤKWUO »